Inyama yeKhari yaseChina enkonkxiweyo Ukutya okuKhawulezileyo kokuFakwayo kunye neFactory | HUIQUAN
1. Xa ukhetha ukutya okusemathinini, kufuneka uqale uqaphele ukuqina kokutya okusemathinini ukuqinisekisa ukuba ukutya okusemathinini okuthengayo kuvaliwe ngokupheleleyo. Ukongeza, kungcono ukhethe iimveliso eziveliswa ziimpawu ezinkulu kwaye uzithenge kwiindawo eziqhelekileyo zokuthengisa.
2. Qwalasela ukuba isingxobo sangaphandle sicocekile kwaye sicocekile, nokuba umbhalo wesandla ucacile, nokuba ungaphakathi kwixesha lewaranti, kwaye ingaba ileyibhile yokutya inalo na igama, idilesi, inombolo yoqhagamshelwano kunye nolunye ulwazi lwenkampani.
3. Umoya ongaphakathi kwitoti yokutya ubhityile, kwaye umoya ongaphandle uya kungqusha umphezulu wetoti. Ke ngoko, umphezulu wetoti elungileyo ujike kancinane. Umphezulu ophumela ngaphandle luphawu lokuba ukutya okusetotini konakele.
Ukukhetha ngokucokisekileyo izixhobo, iinkqubo ezininzi, kunye nolawulo olungqongqo, ukuze ukwazi ukutya ngokuzithemba.
Incasa yemveliso, ukupheka ngokucokisekileyo, ukupakishwa kwevacuum, gcina ukutya okumnandi.
Ukuthengiswa ngokuthe ngqo kwefektri, isiqinisekiso sokwenyani, emva kokuthengisa, kunye nokubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni.
Curry irayisi yenkomo
I-curry yenkomo enkonkxiweyo, isitya serayisi, i-broccoli.
1. Vula kwaye ufudumeze ikheri yenkomo enkonkxiweyo.
2. Fudumeza irayisi.
3. I-Blanch i-broccoli ngamanzi abilayo.
4. Ekugqibeleni, yongeza amakhowa asemathinini, i-knuckles yengulube ekhonkxiweyo, iklabishi, i-bean sprouts, kunye nemifuno yemostade, i-stir-fry, yongeza i-shallots, kwaye uphake.
Ngaphambili: Inyama yenkomo enkonkxiweyo enoBomi obude beShelf
Okulandelayo: 340g yenkukhu enkonkxiweyo Isidlo sasemini Inyama
I-Canning Beef Brisket, Inkukhu enkonkxiweyo, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Inyama yehagu enkonkxiweyo, Inyama yehagu yesidlo sasemini, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo,